Amabinzana amahle onokuwasebenzisa kwi-Instagram! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Amabinzana amahle onokusebenzisa kwi-Instagram!
NgoJanuwari 9, 2019 0 IiCententarios 2327
Okwangoku iinethiwekhi zentlalo ziyinxalenye yemihla ngemihla, yonke into esiyifunayo Yibambe kwifoto, ibinzana okanye ividiyo. Konke ukuze kufikelelwe kwisalamane ngasinye.
Instagram Yinethiwekhi yentlalo evumele ukuba sinxibelelane ngokuthatha iifoto iminyaka eliqela. Ukubamba ixesha lethu elifanelekileyo yinto esiyixabisa ngokuqinisekileyo ngonaphakade.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, asinokwabelana ngeefoto ezilungileyo kuphela kodwa kunye noko sikuvayo ngokwabelana naye wonke umntu.
Sonke siyayazi ukuba ifoto elungileyo kufuneka ikhatshwe libinzana eliyiphelelisayo, ngoko ke sifuna ukukunika uluhlu amabinzana amahle e-Instagram Ngokuqinisekileyo oko kuya kukunceda kakhulu.
Amabinzana amahle kakhulu kwi-Instagram
Maninzi amabinzana amahle e-Instagram onokuyisebenzisa, zonke ezi zinto ziya kuxhomekeka kwintsingiselo ofuna ukubanika yona, kuba banokuba ngamagama amahle umhlobo, isihlobo, uthando lobomi bakhozokuziphucula negocios kwaye okuninzi ngaphezulu.
Into ebalulekileyo malunga nayo yonke into yinqaku ofuna ukufikelela kulo kunye nebinzana kunye nokukwazi ukufikelela kumyalezo kunye nefuthe kubalandeli bakho. Amaxesha amaninzi unako Sebenzisa i-wits yakho ukwenza ibinzana lakho, nangona kunjalo ungasebenzisa amabinzana adumileyo asele uthandabuze ukuba uya kunika olo thintelo olukhethekileyo kwifoto yakho.
Yongeza abalandeli ngamabinzana amahle
Umxholo obonakalayo we-Instagram ubaluleke kakhulu, nangona kunjalo umyalezo omnikeza kwisithuba sakho ngasinye ubalulekile njengefoto oza kwabelana ngayo. Amabinzana aya kuba yinxalenye esisiseko se-ankile leyo iya kwenza abasebenzisi bafune ukuhlala kwiprofayile yakho, kuxhomekeka ekubeni inkampani okanye iakhawunti yakho iza layisha abalandeli.
Amagqabantshintshi okushukumisela axabise kakhulu, okufanayo kuya kulezo zintambo zincinci zikhokelela umsebenzisi ekubonakaliseni nasekucamngca ngobomi bakhe. Yonke into iya kuhlala ixhomekeka kumxholo oza kuwunikezela kunye nokuba uyila kangakanani ukubeka ibinzana elichanekileyo elinokutsala abathengi bakho.
Okukhona udibanisa kunye nomfanekiso okanye ividiyo ngcono amathuba okwanda kokuhamba kwabalandeli okuya kuthi ngokukhawuleza kufike iakhawunti yakho.
Amagqabantshintshi amahle kwi-Instagram
Oku ikakhulu kukubonakalisa lonke uthando kunye nobuhlobo onokuziva kubo abahlobo bakho, ngokwakho, abalandeli bakho, indalo, ubomi kunye nayo yonke into oyithandayo kunye nabanye.
Silungiselele uluhlu oluhle lwamabinzana amahle e-Instagram oya kuyithanda ngokuqinisekileyo kwaye unokubeka izithuba zakho ezininzi ukuba ufuna, into ebalulekileyo ukwazi ukuba yeyiphi oza kuyisebenzisa ngexesha elifanelekileyo.
"Ubuhlobo bethu abuxhomekekanga kwizinto ezinjengendawo kunye nexesha." - URichard Bach
"Abo baphupha emini bayazazi izinto ezininzi ezibalekayo abo baphupha kuphela ebusuku" - Edgar Allan Poe
“Qhubeka nangona wonke umntu elindele ukuba uyeke. Musa ukuvumela intsimbi ekuwe. - UTeresa waseCalcutta
"Ukuba ufuna ukutshintsha umhlaba, zitshintshe." - Mahatma Gandhi
"Ekuphela kwendlela yokuhlaziya umhlaba kukuba umntu ngamnye azalisekise uxanduva oluhambelana naye" - UCharles Kingsley
"Ukusilela yimpumelelo ukuba sifunda kuyo." - Malcolm Forbes
"Ezona ntsuku zilahlekileyo ebomini bakho zezo ungakhange uncume." Cummings
“Ngoku, ukuba kancinci kancinci uyeka ukundithanda, ndiza kuyeka ukukuthanda kancinci kancinci. Ukuba uthe wandilibala ngequbuliso, sukundikhangela, sele ndikulibele "- Pablo Neruda
"Ngenxa yokufuna ukuxolelwa, ukulibala makuze" - UAlfred de Musset
"Ubulumko bokugqibela kukuba namaphupha amakhulu ngokwaneleyo ukuba angalahleki kubo ngelixa belandelwa" - UWilliam Faulkner
Yamkela uxanduva ngobomi bakho. Qiniseka ukuba nguwe oza kuya apho ufuna ukuya khona. Akukho namnye umntu ”- Les brown
“Ekuphela kwendlela yokwenza umsebenzi olungileyo kukuthanda into oyenzayo. Ukuba awuyifumani, qhubeka ujonge. Ungahlali ” - Steve Jobs
"Ubomi yinto ezothusayo okanye ayisiyonto" UHelen Keller"Uhambo lweekhilomitha eziliwaka luqala ngonyathelo olunye" - Lao Zu
"Umvuzo womsebenzi wethu awuyiyo le siyifumanayo, kodwa yile nto siyiyo" - Paulo Coelho
"Ukuba ithuba alinkqonkqozi, yakha umnyango"- I-Milton berle
"Eyona yeyona nto ibalaseleyo yobomi kukwenza iintlungu njengekhubalo lokuphilisa" - Frida Kahlo
Ndiyazi ukuba kuya kufuneka ndinciphise umzimba. Kodwa ndikuthiyile ukuphulukana ” - IMafalda
Enye yeendlela ezilungileyo zokuba naliphi na ibinzana kukuba ungowasekuqaleni ngokupheleleyo, ngamanye amaxesha amabinzana alula kunye nawentsingiselo abona anokuba nefuthe kubasebenzisi kakhulu.
Ukuyila kwakho kuya kubaluleke kakhulu kwaye kuya kwenza umahluko omkhulu kukhuphiswano onalo kwimarike. Zama nje!
Ve yeyiphi iiyure ezilungileyo ukuthumela kwi-Instagram.
1 Amabinzana amahle kakhulu kwi-Instagram
1.1 Yongeza abalandeli ngamabinzana amahle
1.2 Amagqabantshintshi amahle kwi-Instagram
NgoJanuwari 9, 2019
Iintengiso zamabali e-Instagram Funda ngoku!
Cacisa imbali ye-Instagram Funda apha!